Maxaa ka soo baxaysa qarixii ka dhacay magaalada Kismaayo? – idalenews.com
Maxaa ka soo baxaysa qarixii ka dhacay magaalada Kismaayo?
Qaraxan oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka dhashey qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii gaari nuuca raaxada ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu ku qarxay goob lagu qaxweeyo oo kutaala magaaladasi.
Wariyaha warbaahinta qaranka Aadan Max’ed Salaad ayaa SONNA u sheegay in ilaa 17 dhaawac ah inta la xaqiijiyay la dhigay isbitalka magaalada Kismaayo, waxaa sidoo kale jira qasaare dhimasho ah wallow aan la ogeyn tirada rasmiga ah.
Dhinaca kale Afhayeenka wasaaradda Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wakaalada wararka SONNA u sheegey in hay’adaha amaanka ay ka war heleen in gaarigaasi laga soo buuxiyay walxaha qarxa balse kooxaha nabad diidka ee Alshabaab ay qarxiyeen markii la ogaaday kadib.
Goobta qarax uu ka dhacay ayaa ah goob ay inta badan isugu yimaadaan bulshada magaalada Kismaayo waxaana xiligaasi ku sugnaa dad badan oo shacab ah.
Qarax Baabuur oo ka Dhacay Muqdisho
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu dilay K/Africa iyo boolisku Koofur Afrika oo baaris wada.